कोरोना भाइरस: भारत बन्यो भयाबह ! मृतकको संख्या ४ सय नजिक, साढे ११ हजारभन्दा बढी संक्रमित – kalikadainik.com
कोरोना भाइरस: भारत बन्यो भयाबह ! मृतकको संख्या ४ सय नजिक, साढे ११ हजारभन्दा बढी संक्रमित
बुधबार, बैशाख ०३, २०७७ | ११:५६:०७ |
काठमाडौ । विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरस भारतमा तिव्र रुपमा बढ्दैछ । अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार भारतमा ११ हजार ५०२ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । दैनिक भास्करले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या पनि ४०० नजिक पुगेको छ । भारतमा हिजो देखि ३ मे सम्मका लागि लकडाउन थप गरिएको छ । तर यहाँ एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्दै आएका मजदुरहरुका कारण लकडाउन असफलजस्तै भएको छ ।
भारतमा अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावित राज्यहरुका महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिलनाडू, राजस्थान लगायत राज्य रहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका ४ वटै राज्यहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या १ हजार नाघेको छ । महाराष्ट्रमा २ हजार ६८४ जना संक्रमित भएकोमा १७८ जनाको ज्यान गएको छ । जानकारी अनुसार २५९ जना निको पनि भएका छन् र बाँकीको उपचार भइरहेको छ । यहाँको मुख्य शहर मुम्बईमा धेरैजसो नेपालीहरु बसोबास र रोजगार गर्ने गर्छन ।
भारतको राजधानी दिल्लीको कुरा गर्दा १ हजार ५६१ जना संक्रमित हुँदा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म ३१ जना निको भएका छन् भने थपको उपचार हुँदैछ । तामिलनाडूमा १ हजार २०४ जना संक्रमित हुँदा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यहाँ ८१ जना निको भएका छन भने अरुको उपचार भइरहेको छ । राजस्थानमा १ हजार पाँच जना कोरोना संक्रमणको सिकार हुँदा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म यस राज्यमा १४७ जना निको भएका छन् भने अरुको उपचार हुँदैछ ।